မကျဆီနဲ့ ရျောနယျလျဒိုတို့ရဲ့ခတျေ ကုနျဆုံးပွီး နဝေငျဘုရငျတှဖွေဈလာခဲ့ပွီလား? – Sports A2Z
Article • Bundesliga • La Liga • Ligue1 • Serie A • UCL&UEL
ဒီတဈပတျ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ မကျဆီ- ရျောနယျလျဒို ခတျေကုနျဆုံးပွီလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှရေဲ့ အခွအေနကေို မကျြဝါးထငျထငျ မွငျတှရေ့မှာပါ။ ဒီစာကို ရေးနစေဉျမှာတော့ ခရစ်စတီယာနို ရျောနယျလျဒိုရဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကော မကျဆီရဲ့ ဘာစီလိုနာအသငျးပါ ခနျြပီယံလိဂျ ၁၆ သငျးအဆငျ့ကနေ လကျပွနှုတျဆကျခဲ့ရပွီဖွဈတယျ။
တဈဖကျမှာတော့ မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုခတျေကို အရိုကျအရာဆကျခံမယျ့ ဟာလနျး-အမျဘာပအေတှဲက ကမ်ဘာဘောလုံးဇာတျခုံစငျမွငျ့အလယျမှာ ကောငျးကောငျးကွီး အသုံးတျောခံနတောကို တှလေ့ာရတယျ။
မကျဆီဆိုတဲ့ဘုရငျကို သူ့အရိုကျအရာကနေ ဖယျရှားဖို့ဆိုတာ မလှယျကူတဲ့အရာလို့ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈကတညျးက အမျဘာပကေောငျးကောငျးနားလညျခဲ့တယျ။ သဘောပေါကျခဲ့တယျ။ သငျယူခဲ့ရတယျ။ “ကြှနျတျော ၃ ဂိုးသှငျးပွီဆို မကျဆီကိုကွညျ့လိုကျရငျ သူက ၄ ဂိုးသှငျးခလြိုကျပွီဗြ”လို့ အမျဘာပကေ ထုတျပွောခဲ့တယျ။
ဒါဟာ မကျဆီအနနေဲ့ ရညျရှယျခကျြရှိရှိမြား လုပျနသေလားလို့ ဘာကာက ပွငျသဈအသငျးဖျော ဒမျဘီလီကိုပါ သူ့အနနေဲ့ မေးယူခဲ့ရတယျ။ ပွိုငျဆိုငျမှု ပွငျးထနျလှနျးတဲ့ အမျဘာပရေဲ့စိတျမှာ ဒီလိုတှဖွေဈခဲ့တယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ ၂ နှဈက ပွငျသဈလိဂျမှာ အမျဘာပကေ ၂၉ ပှဲကစားပွီး ၃၃ ဂိုးသှငျးခဲ့တယျ။ သူ့အနနေဲ့ ဥရောပရှဖေိနပျဆုကို သိမျးပိုကျဆှတျခူးနိုငျတော့မယျလို့ ထငျမွငျနခေဲ့ပမေယျ့ မကျဆီက သူ့အိပျမကျကို ဖကျြဆီးခဲ့တယျ။
လာလီဂါ ၃၄ ပှဲကစားတဲ့ မကျဆီက ၃၆ ဂိုးသှငျးပွီး ဥရောပရှဖေိနပျဆုရှငျဖွဈသှားခဲ့တယျ။ မကျဆီအတှကျ ၆ ကွိမျမွောကျ ရှဖေိနပျဆုဖွဈသလို ၃ နှဈဆကျတိုကျ ရယူသှားခဲ့တာဖွဈတယျ။ ကစားသမားဘဝ အစမှာကတညျးက မကျဆီရဲ့လှမျးမိုးမှုကို ကြျောဖွတျဖို့ အမျဘာပရေုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ ဒီနာကွညျးမှုတှေ ရှိခဲ့တယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့ ခနျြပီယံလိဂျ ၁၆ သငျးအဆငျ့ ဒုတိယအကြော့ တှဆေုံ့မှုမှာလညျး ပီအကျဈဂြီနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ တဈဖကျတဈဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့အတှကျ မကျဆီနဲ့ ဘာကာတို့ Come Back မလုပျနိုငျခဲ့ပဲ အမျဘာပရေဲ့ ပီအကျဈဂြီအသငျးက နှဈကြော့ပေါငျး ငါးဂိုး-နှဈဂိုးနဲ့ ကှာတာဖိုငျနယျကို တကျရောကျသှားပွီး ဘာစီလိုနာကတော့ ပွိုငျပှဲက စောစောစီးစီး ထှကျခဲ့ရပါတယျ။ မကျဆီဟာ နဝေငျဘုရငျဖွဈလာပွီလား? မကျဆီအတှကျ ဖွဆေေးရှိပါသေးရဲ့လား? ဘောလုံးလောကမှာ ဒီမေးခှနျးတှေ ဆကျတိုကျထှကျလာတယျ။။
မကျဆီက လကျရှိ ၂၀၂၁ အစတညျးက အရငျခွစှေမျးကို ပွနျပွနတေယျ။ ငယျမူငယျသှေးပွနတေယျ။ ၂၀၂၁ ထဲ ၁၅ ဂိုးသှငျးထားတဲ့ မကျဆီထကျ ဂိုးပိုသှငျးထားတာက လီဗနျဒေါ့ဗျစကီး(၁၇ ဂိုး)တဈယောကျကိုသာ မွငျရတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာကာရဲ့ အကွောငျးတရားကတော့ ငွငျးပယျမရတော့ဘူး။ မကျဆီထကျ တဈဆငျ့နိမျ့တဲ့ ကစားသမားတှနေဲ့ စုဖှဲ့ခံထားရတယျ။ ပီအကျဈဂြီလောကျ အငျအားတောငျ့တငျးတဲ့ အသငျးအဆငျ့မှာ မရှိတော့ပါဘူး။
ပှဲကွီးတှမှော ဘာကာကို ဆှဲတငျလရှေိ့တဲ့ မကျဆီက အခုတော့ ဘာကာရဲ့ ဆှဲခခြွငျးကို ခံနရေတယျလို့ သုံးသပျထားကွတယျ။ ငွငျးမရတဲ့အခကျြတှကေတော့ ဘိုငျယနျ၊ လီဗာပူးလျ၊ ရိုးမား၊ ဂြူဗငျတပျဈတို့ကို အရေးနိမျ့ပွီး ခနျြပီယံလိဂျကနေ ၄ နှဈဆကျတိုကျ ကနျထုတျခံရတယျ။ နာကငျြစရာကောငျးပမေယျ့ ဘာကာရဲ့ ဖုံးကှယျထားလို့ မရတော့တဲ့ အနအေထားဖွဈတယျ။ ဥရောပတနျးမီအဆငျ့လို့ ဒီအသငျးကို သတျမှတျဖို့ ခကျလာတယျ။
ခံစဈညံ့ဖငျြးလှနျးတဲ့ ဘာကာကို မကျဆီက ဦးဆောငျကစားခဲ့ပမေယျ့ တကယျတမျးမှာ ဒဏျရာရ လူနာမြားနတေဲ့ ပီအကျဈဂြီနဲ့အတူ ခနျြပီယံလိဂျ အသကျသှေးကွောအောငျပှဲကို ဆောငျယူလာသူက တဈရှိနျထိုး တိုးတကျပွီး ရပျတနျ့ဖို့ ခကျတဲ့ အမျဘာပဖွေဈလာတယျ။
လှနျခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၁၆ မှာ တဈကမ်ဘာလုံးက မကျဆီကို မကျြစိဒေါကျထောကျ ကွညျ့ရှုခဲ့ကွပမေယျ့ တကယျ့မကျြစိကစြရာက အမျဘာပေ၊ သူ့ခွရောကို တဈထပျတညျး လိုကျနငျးလာပွီး လူတှအောရုံစိုကျမှုကို တဈဝကျခှဲယူသှားခဲ့တဲ့ ဟာလနျး၊ ဒီနှဈဦးဖွဈလာတယျ။
နျောဝသေားဟာ အနျဒါလူစီယာက ဆနျခကျြပဈဟှမျကှငျးမှာ အိမျရှငျ ဆီဗီလာတို့ကို ခမြှေုနျးတယျ။ ဒေါ့မှနျအတှကျ နှဈဂိုးသှငျးတယျ။ တဈဂိုးဖနျတီးတယျ။ ဒေါ့မှနျက ၂-၃ အနိုငျရလဒျကို အိမျပွနျသယျလာပွီး နောကျတဈဆငျ့မှာလညျး သူကပဲ ဦးဆောငျဂိုးနှဈဂိုး ထပျသှငျးခဲ့တယျ။
“ပွီးခဲ့တဲ့ညက ကြှနျတျော အမျဘာပေ ကစားတာကို စောငျ့ကွညျ့ခဲ့တယျ။ သိပျကောငျးတဲ့ သှငျးဂိုးတခြို့ကို သူသှငျးယူခဲ့တယျ။ ဒါကိုမွငျရတာက ကြှနျတေျာ့အတှကျ ပိုကျဆံမကုနျဘဲ ရရှိလိုကျတဲ့ တှနျးအားတှပေဲ”လို့ အဲဒီညက ဟာလနျးက ဆိုခဲ့တယျ။ လူငယျသှေးသဈတှရေဲ့ ဒီလိုနှုတျထှကျစကားမြိုးက ကမ်ဘာဘောလုံးပရိသတျရဲ့ နှလုံးသညျးပှတျကို ကိုငျလှုပျသှားတယျ။ အုတျအုတျကကျြကကျြဖွဈသှားစခေဲ့တယျ။ ဒါဟာအမှနျပါ။
မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုခတျေ အလှနျမှာ တကျသဈစ လူငယျပါရမီရှငျ၊ ကမ်ဘာ့အဆငျ့မီ ပါရမီရှငျဘောလုံးသမား၊ တိုကျစဈမှူးတှကေ မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုပွိုငျပှဲရဲ့ အမှကေို ဆကျခံမယျလို့ ဘောလုံးပရိသတျစဈစဈတှရေဲ့ မကျြလုံးတှကေို တလကျလကျဖွဈလာခဲ့တယျ။ အရှယျရလာတဲ့ မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုပရိသတျနဲ့ အာသာငမျးငမျး တပျမကျတဲ့ ဘောလုံးပရိသတျစဈစဈတှဟော တမဟုတျခငျြးပွနျလညျနုပြိုသှားခဲ့တယျ။ သူတို့တပျမကျတဲ့အရာတှေ အစကနေ တဈပတျပွနျလညျတော့မယျ။ ဒီမြှျောလငျ့ခကျြတှေ ခိုငျမာလာခဲ့တယျ။
မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုခတျေက မကုနျဆုံးသေးပါဘူးလို့ ကိုငျစှဲငွငျးရငျမှနျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သိပျမကွာတဲ့နှဈပိုငျးမှာ တခနျးရပျရတော့မှာဖွဈတယျ။ ရှကျဟောငျးကွှရေငျ ရှကျသဈဝလေိမျ့မယျ။ လာလီဂါနဲ့ စီးရီးအကေ ဘုရငျတှကေို တိုကျဆိုငျစှာပဲ သူတို့နဲ့ မတူတဲ့ လီဂူးဝမျးနဲ့ ဘှနျဒကျဈလီဂါက နနျးခသြှားတော့မယျ။
ရျောနယျလျဒိုက အသကျ ၃၆ မှာ ရုပျပိုငျးအရ အမွငျ့ဆုံးမှာ တညျဆောကျထားဆဲဖွဈတယျ။ ဂိုးသှငျးအား ကောငျးနဆေဲဖွဈတယျ။ မကျဆီက အသကျ ၃၃ မှာ လနျးဆနျးတကျကွှပွီး သှကျလကျနုပြိုဆဲဖွဈတယျ။ ဝမျးနညျးစရာကောငျးတာ တဈခကျြကတော့ ၂၀၀၄-၀၅ ခုနှဈနောကျပိုငျး မကျဆီ-ရျောနယျလျဒိုနှဈဦးစလုံး ပါဝငျမလာတဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ကှာတားဖိုငျနယျအဆငျ့ကို ကြှနျတျောတို့ ပထမဆုံး မွငျတှရေ့ပါပွီ။ ဒါကို လကျသငျ့ခံရပါမယျ။ ဂြူဗငျတပျဈက ပျေါတိုကို အဝေးဂိုးစညျးမဉျြးနဲ့ အရေးနိမျ့ခဲ့ပွီ။ ဘာကာက အငျအားခငျြးမမြှတဲ့ အမျဘာပအေမွငျ့ဆုံးစှမျးရညျရောကျရှိနတေဲ့ ပီအကျဈဂြီကို Come Back မလုပျနိုငျခဲ့ပါဘူး။
ဒီပှဲမှာ အမျဘာပကေ တဈဂိုးထပျသှငျးခဲ့လို့ မကျဆီကို ကြျောနငျးပွီး ကမ်ဘာ့သမိုငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျ ၂၅ ဂိုးပွညျ့သှားတဲ့ အငယျရှယျဆုံး ဘောလုံးသမားဆိုတဲ့ စံခြိနျရှငျဖွဈလာပါတယျ။ ဒါက အမျဘာပရေဲ့ နာကွညျးမှုတှကေို ကုစားပေးနိုငျဖို့ အကောငျးဆုံး ဖမျးဆုပျနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးလညျးဖွဈလာခဲ့ပွီလို့ ဆိုရမှာပါပဲလေ…။
ZAWGYI: ဒီတစ်ပတ် ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ မက်ဆီ- ရော်နယ်လ်ဒို ခေတ်ကုန်ဆုံးပြီလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရဲ့ အခြေအနေကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ဒီစာကို ရေးနေစဉ်မှာတော့ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကော မက်ဆီရဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းပါ ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့်ကနေ လက်ပြနှုတ်ဆက်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။
တစ်ဖက်မှာတော့ မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုခေတ်ကို အရိုက်အရာဆက်ခံမယ့် ဟာလန်း-အမ်ဘာပေအတွဲက ကမ္ဘာဘောလုံးဇာတ်ခုံစင်မြင့်အလယ်မှာ ကောင်းကောင်းကြီး အသုံးတော်ခံနေတာကို တွေ့လာရတယ်။
မက်ဆီဆိုတဲ့ဘုရင်ကို သူ့အရိုက်အရာကနေ ဖယ်ရှားဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူတဲ့အရာလို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကတည်းက အမ်ဘာပေကောင်းကောင်းနားလည်ခဲ့တယ်။ သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ သင်ယူခဲ့ရတယ်။ “ကျွန်တော် ၃ ဂိုးသွင်းပြီဆို မက်ဆီကိုကြည့်လိုက်ရင် သူက ၄ ဂိုးသွင်းချလိုက်ပြီဗျ”လို့ အမ်ဘာပေက ထုတ်ပြောခဲ့တယ်။
ဒါဟာ မက်ဆီအနေနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိများ လုပ်နေသလားလို့ ဘာကာက ပြင်သစ်အသင်းဖော် ဒမ်ဘီလီကိုပါ သူ့အနေနဲ့ မေးယူခဲ့ရတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ အမ်ဘာပေရဲ့စိတ်မှာ ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က ပြင်သစ်လိဂ်မှာ အမ်ဘာပေက ၂၉ ပွဲကစားပြီး ၃၃ ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုကို သိမ်းပိုက်ဆွတ်ခူးနိုင်တော့မယ်လို့ ထင်မြင်နေခဲ့ပေမယ့် မက်ဆီက သူ့အိပ်မက်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။
လာလီဂါ ၃၄ ပွဲကစားတဲ့ မက်ဆီက ၃၆ ဂိုးသွင်းပြီး ဥရောပရွှေဖိနပ်ဆုရှင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ မက်ဆီအတွက် ၆ ကြိမ်မြောက် ရွှေဖိနပ်ဆုဖြစ်သလို ၃ နှစ်ဆက်တိုက် ရယူသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ကစားသမားဘဝ အစမှာကတည်းက မက်ဆီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ အမ်ဘာပေရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ဒီနာကြည်းမှုတွေ ရှိခဲ့တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ချန်ပီယံလိဂ် ၁၆ သင်းအဆင့် ဒုတိယအကျော့ တွေ့ဆုံမှုမှာလည်း ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ ဘာစီလိုနာတို့ တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့အတွက် မက်ဆီနဲ့ ဘာကာတို့ Come Back မလုပ်နိုင်ခဲ့ပဲ အမ်ဘာပေရဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းက နှစ်ကျော့ပေါင်း ငါးဂိုး-နှစ်ဂိုးနဲ့ ကွာတာဖိုင်နယ်ကို တက်ရောက်သွားပြီး ဘာစီလိုနာကတော့ ပြိုင်ပွဲက စောစောစီးစီး ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။ မက်ဆီဟာ နေဝင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီလား? မက်ဆီအတွက် ဖြေဆေးရှိပါသေးရဲ့လား? ဘောလုံးလောကမှာ ဒီမေးခွန်းတွေ ဆက်တိုက်ထွက်လာတယ်။။
မက်ဆီက လက်ရှိ ၂၀၂၁ အစတည်းက အရင်ခြေစွမ်းကို ပြန်ပြနေတယ်။ ငယ်မူငယ်သွေးပြနေတယ်။ ၂၀၂၁ ထဲ ၁၅ ဂိုးသွင်းထားတဲ့ မက်ဆီထက် ဂိုးပိုသွင်းထားတာက လီဗန်ဒေါ့ဗ်စကီး(၁၇ ဂိုး)တစ်ယောက်ကိုသာ မြင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာကာရဲ့ အကြောင်းတရားကတော့ ငြင်းပယ်မရတော့ဘူး။ မက်ဆီထက် တစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ စုဖွဲ့ခံထားရတယ်။ ပီအက်စ်ဂျီလောက် အင်အားတောင့်တင်းတဲ့ အသင်းအဆင့်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။
ပွဲကြီးတွေမှာ ဘာကာကို ဆွဲတင်လေ့ရှိတဲ့ မက်ဆီက အခုတော့ ဘာကာရဲ့ ဆွဲချခြင်းကို ခံနေရတယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြတယ်။ ငြင်းမရတဲ့အချက်တွေကတော့ ဘိုင်ယန်၊ လီဗာပူးလ်၊ ရိုးမား၊ ဂျူဗင်တပ်စ်တို့ကို အရေးနိမ့်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ကနေ ၄ နှစ်ဆက်တိုက် ကန်ထုတ်ခံရတယ်။ နာကျင်စရာကောင်းပေမယ့် ဘာကာရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရတော့တဲ့ အ​နေအထားဖြစ်တယ်။ ဥရောပတန်းမီအဆင့်လို့ ဒီအသင်းကို သတ်မှတ်ဖို့ ခက်လာတယ်။
ခံစစ်ညံ့ဖျင်းလွန်းတဲ့ ဘာကာကို မက်ဆီက ဦးဆောင်ကစားခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ ဒဏ်ရာရ လူနာများနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီနဲ့အတူ ချန်ပီယံလိဂ် အသက်သွေးကြောအောင်ပွဲကို ဆောင်ယူလာသူက တစ်ရှိန်ထိုး တိုးတက်ပြီး ရပ်တန့်ဖို့ ခက်တဲ့ အမ်ဘာပေဖြစ်လာတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက မက်ဆီကို မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်ရှုခဲ့ကြပေမယ့် တကယ့်မျက်စိကျစရာက အမ်ဘာပေ၊ သူ့ခြေရာကို တစ်ထပ်တည်း လိုက်နင်းလာပြီး လူတွေအာရုံစိုက်မှုကို တစ်ဝက်ခွဲယူသွားခဲ့တဲ့ ဟာလန်း၊ ဒီနှစ်ဦးဖြစ်လာတယ်။
နော်ဝေသားဟာ အန်ဒါလူစီယာက ဆန်ချက်ပစ်ဟွမ်ကွင်းမှာ အိမ်ရှင် ဆီဗီလာတို့ကို ချေမှုန်းတယ်။ ဒေါ့မွန်အတွက် နှစ်ဂိုးသွင်းတယ်။ တစ်ဂိုးဖန်တီးတယ်။ ဒေါ့မွန်က ၂-၃ အနိုင်ရလဒ်ကို အိမ်ပြန်သယ်လာပြီး နောက်တစ်ဆင့်မှာလည်း သူကပဲ ဦးဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုး ထပ်သွင်းခဲ့တယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ညက ကျွန်တော် အမ်ဘာပေ ကစားတာ​ကို စောင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ သွင်းဂိုးတချို့ကို သူသွင်းယူခဲ့တယ်။ ဒါကိုမြင်ရတာက ကျွန်တော့်အတွက် ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ ရရှိလိုက်တဲ့ တွန်းအားတွေပဲ”လို့ အဲဒီညက ဟာလန်းက ဆိုခဲ့တယ်။ လူငယ်သွေးသစ်တွေရဲ့ ဒီလိုနှုတ်ထွက်စကားမျိုးက ကမ္ဘာဘောလုံးပရိသတ်ရဲ့ နှလုံးသည်းပွတ်ကို ကိုင်လှုပ်သွားတယ်။ အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်ဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်။ ဒါဟာအမှန်ပါ။
မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုခေတ် အလွန်မှာ တက်သစ်စ လူငယ်ပါရမီရှင်၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပါရမီရှင်ဘောလုံးသမား၊ တိုက်စစ်မှူးတွေက မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုပြိုင်ပွဲရဲ့ အမွေကို ဆက်ခံမယ်လို့ ဘောလုံးပရိသတ်စစ်စစ်တွေရဲ့ မျက်လုံးတွေကို တလက်လက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အရွယ်ရလာတဲ့ မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုပရိသတ်နဲ့ အာသာငမ်းငမ်း တပ်မက်တဲ့ ဘောလုံးပရိသတ်စစ်စစ်တွေဟာ တမဟုတ်ချင်းပြန်လည်နုပျိုသွားခဲ့တယ်။ သူတို့တပ်မက်တဲ့အရာတွေ အစကနေ တစ်ပတ်ပြန်လည်တော့မယ်။ ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေ ခိုင်မာလာခဲ့တယ်။
မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုခေတ်က မကုန်ဆုံးသေးပါဘူးလို့ ကိုင်စွဲငြင်းရင်မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာတဲ့နှစ်ပိုင်းမှာ တခန်းရပ်ရတော့မှာဖြစ်တယ်။ ရွက်ဟောင်းကြွေရင် ရွက်သစ်ဝေလိမ့်မယ်။ လာလီဂါနဲ့ စီးရီးအေက ဘုရင်တွေကို တိုက်ဆိုင်စွာပဲ သူတို့နဲ့ မတူတဲ့ လီဂူးဝမ်းနဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါက နန်းချသွားတော့မယ်။
ရော်နယ်လ်ဒိုက အသက် ၃၆ မှာ ရုပ်ပိုင်းအရ အမြင့်ဆုံးမှာ တည်ဆောက်ထားဆဲဖြစ်တယ်။ ဂိုးသွင်းအား ကောင်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ မက်ဆီက အသက် ၃၃ မှာ လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး သွက်လက်နုပျိုဆဲဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာ တစ်ချက်ကတော့ ၂၀၀၄-၀၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း မက်ဆီ-ရော်နယ်လ်ဒိုနှစ်ဦးစလုံး ပါဝင်မလာတဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ်အဆင့်ကို ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး မြင်တွေ့ရပါပြီ။ ဒါကို လက်သင့်ခံရပါမယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်က ပေါ်တိုကို အဝေးဂိုးစည်းမျဉ်းနဲ့ အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီ။ ဘာကာက အင်အားချင်းမမျှတဲ့ အမ်ဘာပေအမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ရောက်ရှိနေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီကို Come Back မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီပွဲမှာ အမ်ဘာပေက တစ်ဂိုးထပ်သွင်းခဲ့လို့ မက်ဆီကို ကျော်နင်းပြီး ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ၂၅ ဂိုးပြည့်သွားတဲ့ အငယ်ရွယ်ဆုံး ဘောလုံးသမားဆိုတဲ့ စံချိန်ရှင်ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါက အမ်ဘာပေရဲ့ နာကြည်းမှုတွေကို ကုစားပေးနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံး ဖမ်းဆုပ်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်လာခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာပါပဲလေ…။